Site na: KongoLisolona: April 18, 2020 00: 33 Enweghị asịsa
Quand, le caméléon prend une direction, il ne tourne pas la tête, faites comme lui, Ayez un objectif dans votre vie et que rien ne vous en détourne
Ogwumagala atụgharịghị isi ya, mana ọ bụ anya ya ka ọ tụgharịrị. O lere anya, gbadaa. Ọ pụtara: gwaa gwaa.
Echela na naanị gị nọ n’ụwa. Mgbe ọ bịarutere ebe, ọ ga-ahụ ụcha ebe ahụ. Ọ bụghị ihu abụọ. Ọ bụ nnabata na mbụ, mgbe ahụ ịkpa ezi agwa.
Umpkari ibe ha anaghị enye aka. Ọ dịbeghị ihe a rụpụtara n'agha ahụ. Gbalịa ịghọta nke ọzọ. Ọ bụrụ na anyị dị, anyị ga-ekweta na nke ọzọ dị.
O buru na ogbawa n’aga, o buliri ukwu ya elu. Ọ na-agbaga. A na-akpọ nke a ịkpachara anya.
Ighaghari, ọ na-akpọgide ọdụ ya, yabụ ọ bụrụ na ụkwụ ya dajụọ, ọ na-anọsi ike. A na-akpọ nke a "Inyocha ya n'azụ". N'ihi ya, abụla nlezianya.
Ọ bụrụ na Oche ahụ hụrụ ihe ọ dọgburu, ọ daghị ya ọsọ, kama ọ na-ezipụ ire ya. Ọ bụrụ na ire ya ga-akpọghachite ya, ọ na-akpọghachi ya. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere oge ọ bụla nwere ịmaliteghachi asụsụ ya na izere ihe ọjọọ. Gaa n’iru n’ihe niile ị na-eme.
Le caméléon ne quitte pas un arbre tant qu’il n’est pas sûr du suivant – Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient !